Ny famatsiana tery, ireo singa mandalo dia manangana onja tombony vaovao - YIC International Co Limited |Ny mpamatsy fitaovana elektronika mihodina |www.YIC-Electronics.com
Home > News > Ny famatsiana tery, ireo singa mandalo dia manangana onja tombony vaovao
Ny famatsiana tery, ireo singa mandalo dia manangana onja tombony vaovao
Ny mpanamboatra indostrialy lehibe roa an'ny capacite multilayer ceramic capacitors (MLCC) Samsung Electro-Mechanics any Korea Atsimo ary ny TDK any Japon dia namoaka tamim-pomba ofisialy ny mpanjifa orinasa voalohany, nanamafy fa ny famatsiana MLCC avo lenta dia mitohy ho tery, indrindra ny fangatahana finday 5G aorian'ny Taom-baovao. Ny habetsaky ny vatan'ny orinasa mpiorina tanibe dia nahatratra ny vinavina 500 tapitrisa voalohany. Raha dinihina ny mekanisma eny an-tsena dia hiakatra tsy ho ela ny vidin'ny MLCC.
Taterina fa mihoatra ny efa-bolana ny fahitana ny baikon'i Yageo sy Walsin, ary hahatratra ny tapany faharoa amin'ny taona. Antenaina hampiakarana arak'izany ny vidiny hahatratrarana ny fiakaran'ny vidin'ny tsena.
Samsung Electro-Mechanics sy TDK no mpamatsy lehibe MLCC faharoa lehibe indrindra sy fahadimy eran'izao tontolo izao. Ireo mpanamboatra roa kosa dia namoaka vaovao momba ny fikasan'izy ireo hampiakatra ny vidiny. Ho fanampin'izany, ny fotoana nanateran'ny mpanamboatra Nissho Murata Manufacturing Co., Ltd. ny fotoana farany teo ho eo ho an'ny vokatra MLCC dia nihoatra ny 112 andro, ny lava indrindra Maharitra 180 andro ny fanasongadinana ny toe-tsena mafana ary ilaina hatrany ny fiakaran'ny vidiny.
Raha ny filazan'ireo mpandinika ny indostria, taorian'ny Taom-baovao, ny MLCC dia manana atmosfera "miakatra avo" matanjaka, indrindra satria ny fangatahan'ny tsena finday finday 5G dia tsara kokoa noho ny nandrasana, ary ny toekarem-ponenana dia nanosika ny fandefasana PC sy NB hitandrina avo tsena farany sy tsena mifandraika amin'ny fiara mandeha haingana.
Manokana, ny orinasa sasany an'ny mpitarika MLCC Nissho Murata Manufacturing dia nampiato ny famokarana taloha noho ny horohorontany tany Tohoku, Japon. Na dia nanohy nanohy ny asany aza izy ireo, manahy ny tsena fa hisy vokany mandritra ny fampiatoana ny asa ny vokatra ankapobeny an'i Murata. Tsy fantatra, koa ny fividianana mavitrika dia fotoana iray hafa manosika hanosika ny vidiny ihany koa.
Raha ny fanadihadiana natao tamin'ny famaritana, ny tsena dia nanantena tamin'ny voalohany fa ny haben'ny tsenan'ny telefaona 5G amin'ity taona ity dia hitombo hatramin'ny 200 tapitrisa tamin'ny taona lasa ka hatramin'ny 500 tapitrisa. Saingy, taorian'ny faran'ny fialantsasatry ny taom-baovao dia nanenjika baiko ireo mpanamboatra finday dimy lehibe ao amin'ny tanibe China. Ny isan'ny finday 5G tombanana avy amin'ireo mpanamboatra dimy amin'ity taona ity dia nahatratra 500 tapitrisa. Tsy ao anatin'izany ireo mpanamboatra index lehibe roa an'ny Samsung sy Apple. Ny volan'ny fandefasana dia mampiseho fa ny fangatahana tsenan'ny telefaona 5G amin'ny ankapobeny dia matanjaka lavitra noho ny vinavinan'ny tsena.
Satria nitombo 30% ny isan'ireo MLCC ampiasain'ny telefaona 5G raha oharina amin'ny telefaona 4G, ny marika finday dimy lehibe ao amin'ny tanibe Shina dia nampitombo ny fangatahana MLCC miaraka.
Nanambara ny orinasan'ny fivoriambe fa nahazo fampandrenesana vao haingana avy amin'ny Samsung Electro-Mechanics sy TDK izy, izay nanipika fa noho ny fangatahana an-trano ny fitaovana elektronika ho an'ny mpanjifa, dia henjana ny famatsiana ireo ampahan'ny MLCC avo lenta ary tokony ho vonona ara-tsaina ireo mpanjifa. ho an'ny vidin'ny MLCC dia miakatra amin'ny fotoana rehetra.
Rehefa miha-henjana ny toe-tsena, mino ny indostria fa ireo mpanamboatra Taiwaney toa an'i Yageo sy Walsin dia tsy hanilika ny fampiakarana ny teny natondrony ho setrin'ny fiakaran'ny vidin'ny mpamokatra Japoney sy Koreana. Nanambara i Yageo fa tsy hanome hevitra momba ny teny nindramina sy baiko azon'ireo mitovy taona aminy, fa hanara-maso akaiky ny fivoaran'ny tsena ary hanao ny valiny mety indrindra.
Namaly i Walsin fa efa mihoatra ny efa-bolana izao ny fahitana ny baiko MLCC sy ny resistor, ary nanomboka nametraka baiko ny mpanjifa tamin'ny telovolana fahatelo. Antenaina fa raha toa ka mihodina milamina ny famatsian-semiconductor amin'ny tapany faharoa amin'ny taona dia ho mafy orina ny fandefasana ny fangatahana terminal lehibe ary hihamafy ny famatsiana ireo singa passive. .